देउवा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम टुङ्गो लगाउन निर्देशन , नेपाल पक्ष सरकारमा नजाने - Top Nepal News
देउवा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम टुङ्गो लगाउन निर्देशन , नेपाल पक्ष सरकारमा नजाने
काठमाडौ । नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष सरकारमा नजाने बताएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज बिहान बोलाउनुभएको बैठकमा नेपाल पक्षले सरकारमा नजाने बताएको हो । नेपाल पक्षबाट बैठकमा सहभागि नेता डा. विजय पौडेलका अनुसार प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुको नाम छिटो दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । जवाफमा पौडेलले नेपाल पक्ष सरकारमा नजाने बताएका थिए ।
बैठकमा सहभागी काँग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काका अनुसार डा. पौडेलले आफूहरुलाई नकुर्न र मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न भनेको जानकारी दिनुभयो । यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि आफूहरु सरकारमा सहभागी नहुने बताउनुभयो । बैठकमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने सरकारमा सहभागी हुनेहरुको नामावली छिट्टै उपलब्ध गराउने बताउनुभयो ।
यस्तै बैठकले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरु टुङ्गो लगाउने जिम्मा शीर्ष नेतालाई दिएको र छिटो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने निर्णय भएको काँग्रेस नेता खड्काले बताउनुभयो । बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम चाँडो टुङ्गोे लगाउन महामन्त्री खड्कालाई निर्देशनसमेत दिनुभयो ।